Isiphumo seGeekBench yokuvuza kwe-Sony Xperia XZ kwaye ayisiyonto intle | Iindaba zeGajethi
Isiphumo seGeekBench yokuvuza kwe-Sony Xperia XZ kwaye ayisiyonto intle kakhulu
Ngexesha lokugqibela leNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona, ​​inkampani yaseJapan ibonise abazimase i-smartphone yayo entsha, i-Sony Xperia XZ. Kule meko, ifemi ihlala ibonisa iimveliso ezininzi kwaye ngokucacileyo yeyona ihlala iphakamisa olona lindelo yi-smartphone. I-Sony Xperia XZ ngokungathandabuzekiyo sisixhobo esinye kuluhlu lwe-Xperia kwaye inyani kukuba ukulibaziseka ukwazisa ngokusesikweni okanye umngcipheko ophantsi kuyilo lwezixhobo zalo kuthetha ukuba incinci nangaphantsi i-Xperia iyathengiswa kwaye ayisiyonto intsha le kaMarko .
Ngoku iziphumo zeGeekBench ezenziwe kwenye yezi Sony Xperia XZ ziye zacocwa kwaye azilunganga njengoko bekulindelwe abaninzi, ngokungathandabuzekiyo ukongeza ukungaqiniseki okungakumbi kwisixhobo esingasaphakamisi inkanuko efanayo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kuyinyani ukuba ineprosesa I-Snapdragon 835 kunye nekhamera erekhoda kwii-FPS ezili-1000 kodwa konke oku kuyehla xa umsebenzisi ebona ukuqhubeka kuyilo okanye ixabiso laso.
Kule meko sishiya iziphumo ezifunyenwe kolu vavanyo zibonisa ukuba amanqaku awalunganga kakhulu:
Ngaphandle kwamathandabuzo, kufuneka kuthiwe izixhobo zekhompyutha ezingaphakathi ngaphakathi kwale Sony Xperia XZ zezona zilungileyo, kodwa iziphumo ezifunyenweyo azintle kakhulu. Kuyinyani ukuba la ngamanani nje kwaye akufuneki ujonge kuwo kuphela ukuba uxele ukuba isixhobo sisebenza kakuhle okanye hayi. Kodwa sele siyiminyaka embalwa apho uphawu alubeki mngciphekweni omkhulu kunye neflegi yalo kwaye oku kuphelela ekuphawuleni kwintengiso nokuba bayayithanda okanye abayithandi, ke masilinde sibone ukuba uSony wenza njani ngale modeli intle kwaye unamandla, kodwa akoyisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isiphumo seGeekBench yokuvuza kwe-Sony Xperia XZ kwaye ayisiyonto intle kakhulu
UDavid Garcia Foronda sitsho
Ukuba abalunganga ngaloo ndlela bayalithoba ixabiso kwaye ndiyifumana, kwaye ukuba akunjalo, nayo.
Phendula kuDavid García Foronda
Umboniso weApple uhlaziywa kunye neendaba kuhlelo lokubhaliweyo